စစ်အစိုးရကမ်းလှမ်းချက် မွန်ပါတီလက်ခံမှု ပါတီတွင်း ကန့်ကွက်ခဲ့သူ CEC ၁၀ ဦး ရှိခဲ့ဟု ဆို၊ ကန့်ကွက်သူ မရှိဆိုသည်မှာ မမှန်ကြောင်း ပြော
Interviews February 8, 2021
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီတွင် ပါဝင်ရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီက သဘောတူကြောင်းသတင်းမှာ မွန်နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများအကြား ယခုရက်ပိုင်းတွင် စိတ်ဝင်စားမှု အမြင့်တက်ဆုံးနှင့် ဝေဖန်ပြောဆိုမှု အပြင်းထန်ဆုံး အကြောင်းအရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်မြို့ ပိုင်ခေတ်ခန်းမ၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ က...
အာဏာသိမ်းမည် ဆိုသည့်အပေါ် သူတို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ
Interviews January 28, 2021
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲစာရင်းတွေ မှားယွင်းခဲ့ပြီး အဆိုပါ မဲစာရင်းများကို တပ်မတော်က ပြန်လည်စိစစ်ရာမြို့နယ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်မှာ ကွာဟချက်ပေါင်း ၈ ဒသမ ၆ သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီကွာဟချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ အစိုးရနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တို့က ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း...
“ ဒါသည် တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုကင်ပေးထားတဲ့ သဘောပဲ ”
SEED for Myanmar တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာ ဟိန်းပိုင်ထူးချစ်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း လာမယ့် အစိုးရသစ်အဖွဲ့မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်မှုအတွက် ပိုမိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီရဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် က ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောကြားချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိုင်းရင်းသားနှင့်...
“အင်အားကြီး ပါတီတွေ ရသွားတဲ့ မဲ ၁၀၀၀ နဲ့ ကျမ ရတဲ့ မဲတစ်မဲက ညီမျှတယ်”
Interviews November 26, 2020
“အင်အားကြီး ပါတီတွေ ရသွားတဲ့ မဲ ၁၀၀၀ နဲ့ ကျမ ရတဲ့ မဲတစ်မဲက ညီမျှတယ်” 20/11/2020 Hi Burma Honesty Information မိုးမိုး တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဒေါ်စုရည်ဖြိုးအောင်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ( NDF) ကို ကိုယ်စားပြုပြီး နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်မှ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့...
Interviews November 25, 2020
“ကျမကို မဲပေးတဲ့ ပြည်သူတွေ ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ မဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျေနပ်တယ်” 22/11/2020 Hi Burma Honesty Information ကြည်ဖြူ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာဟာ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ စံချိန်တင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၇ဦးမှာ ၄ဦးက အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲမှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့...
UEC ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတို့ အမြင်
“အစိုးရအနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ သဘောထားကြီးမှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ” ရိုးဂုဏ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ရက်ပေါင်း ၂၀ ဝန်းကျင်ပဲ လိုတော့တဲ့အချိန်မှာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် - UEC က ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပတော့မယ့် နေရာဒေသတွေကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုကြေညာလိုက်တဲ့ အထဲမှာ...
“ကျွန်မတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်က ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ဘူး”
မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈) NLD ပါတီ ကိုယ်စားပြု အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်မြတ်သီတာထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း မကြာမီ ကျင်းပတော့မယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၇ ခုက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၉၁ ဦးနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတို့ဟာ ပြည်နယ်ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံး ၄၅နေရာစလုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၁၂ ပါတီနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်အတွက် တသီးပုဂ္ဂလအပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄၄ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော် တစ်နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈) တစ်နေရာ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် နှစ်နေရာ၊ စုစုပေါင်း လေးနေရာရရှိတဲ့ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီ ငါးခုက နေရာပြည့် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈) မှာ NLD ပါတီ ကိုယ်စားပြု အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်းကို ဟင်္သာမီဒီယာက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)ကနေ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်သက်တမ်းမှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီဝင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်္သာမီဒီယာ - ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်သက်တမ်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေထဲက မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတာ ဘာတွေပါလဲ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း - ကျွန်မတို့ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့နော်။ ဒေသဖွံဖြိုးရေးတွေ ရှိမယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတချို့ ခံစားနေရတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းပေးတာတွေရှိမယ်။ ပြီးတဲ့အခါ လွှတ်တော်မှာ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ရှိမယ်ပေါ့။ အဲဒီထဲကနေမှ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ရင်ထဲက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ဟာကတော့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းမှာပေါ့နော်။ ကျွန်မကနေ ကျွန်မ ဘာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ ပြောတာထက်စာရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုဟာ သူတို့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေမှာပဲပေါ့။ ကျွန်မ ဒါ ယုံကြည်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ လွှတ်တော်မှာ လုပ်ဆောင်တာတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဥပဒေတွေ ဆွေးနွေးတယ်။ လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီထဲကနေမှ ကျွန်မ ကျေနပ် အားအရဆုံးကို ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်မတို့ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေတင် မကဘူး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ကျွန်မတို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကို ယုတ်လျော့စေတဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော် ပါဝင်နေမှု ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချဖို့ကိစ္စတွေ ကျွန်မတို့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ကျွန်မတို့ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်က ပြည်သူတွေအတွက်တင် မဟုတ်ဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်၊ ဒီမိုကရေစီအတွက်ကို ပြောခဲ့ရတာ၊ ဆွေးနွေးခဲ့ရတာတွေကတော့ အမှတ်တရပါပဲ။ ဟင်္သာမီဒီယာ - ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်သက်တမ်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်တွေ ကိုယ့်ကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရကျိုးနပ်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆပါသလား ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း - အဲဒါလည်း ခုနက ပြောသလို ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီမေးခွန်းက ပြည်သူတွေကို မေးလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေက ကျွန်မတို့ကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခဲ့ရတာ ကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်၊ မဲပေးရတာ တန်တယ်လို့ထင်သလားဆိုတာက အမှန်က ပြည်သူတွေကို မေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတည်း အမြဲ ရှိနေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျေနပ်မယ်လို့ ကျွန်မတို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့က တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ အဂတိလိုက်စားမှု လုံးဝမရှိဘူး။ ဒါ ကျွန်မတို့ ရဲရဲကြီး အာမခံရဲတယ်။ ၂၀၁၅ မှာ ပြည်သူတွေ ဝန်းရံထောက်ခံခဲ့တဲ့၊ ပေးခဲ့တဲ့ခွန်အားနဲ့ ကျွန်မတို့မှာ ရှိတဲ့ စာရိတ္တ၊ သတ္တိနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ပြည်သူအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ၊ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူတွေကတော့ ကျွန်မတို့ကို မဲပေးရတာ ကျေနပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်။ ဟင်္သာမီဒီယာ - ခု လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြိုင်ဘက် ပါတီတွေကို အနိုင်ရဖို့ ဘယ်လိုမျိုး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း - ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေကို အနိုင်ရဖို့ဆိုတာထက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်က ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်က ကျွန်မတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ပေါ့နော်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို သွားဖို့အတွက်ကို ဖြတ်သန်းရတဲ့ မှတ်တိုင်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့က ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာထက် ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက်၊ ပြည်သူတွေအတွက်ကို ပြည်သူ့အင်အား၊ သြဇာသက်ရောက်တဲ့စနစ်ကို သွားဖို့အတွက် ကြိုးစားတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို သွားဖို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲမှတ်တိုင်ကို ဖြတ်သန်းဖို့ ဆိုတာက ရွေးကောက်ပွဲ ဒီနေ့ပြီးရင် နောက်နေ့ကစပြီး တစ်ခါ ပြန်ပြီးတော့ ကြိုးစားရတယ်။ အဲဒီကြိုးစားမှုထဲမှာ ပြည်သူလူထုအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်မှန်သမျှဟာ အဲဒီလိုမျိုး ကြိုးစားမှုလို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့က ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာက ပြည်သူလူထုအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဝင်ပြိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့က တကူးတက တရည်တရွယ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တာ မဟုတ်သော်ငြားလည်းပြည်သူလူထုအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသမျှဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်သလိုတော့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်မတို့က ဒီတလောမှ ပြင်ဆင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီး နောက်နေ့ ကျွန်မတို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ က စပြီးတော့ ပြည်သူလူထုအတွက်၊ နိုင်ငံအတွက် ကိုယ် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ၊ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာတွေ အကုန် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပြောရင် ပြောလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဟင်္သာမီဒီယာ - မဲဆန္ဒနယ်ထဲမှာ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိလာနိုင်ပါသလား ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း - ပြိုင်ဘက်တွေကို ဘယ်တော့မှ လျှော့မတွက်ပါဘူး။ အမြဲတမ်း လေးစားပါတယ်။ သူ့အားသာချက်နဲ့သူ ရှိနေကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကြိတ်အနယ်ဆိုရာမှာ တချို့နေရာတွေမှာ ကျွန်မတို့ အားသာတဲ့နေရာတွေ ရှိတယ်။ တချို့နေရာတွေက တချို့ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေ အားသာတဲ့ နေရာတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တစ်မြို့နယ်လုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အကြိတ်အနယ်လို့ ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ရွာကလေးတွေ၊ အုပ်စုလေးတွေမှာတော့ အကြိတ်အနယ် ပြိုင်ရမယ့်နေရာတွေ ရှိပါတယ်။ ဟင်္သာမီဒီယာ - NLD ဟာ ရေပန်းစား လူကြိုက်အများဆုံးပါတီဖြစ်နေပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်တွေက ပါတီကို မဲပေးတာလား၊ လူကို မဲပေးတာလား၊ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း - ၂၀၁၅ တုန်းက ကျွန်မတို့ဆိုတာက ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၅ မှာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့ ပါတီက တာဝန်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ပြည်သူက ကျွန်မတို့ကို အများကြီး မသိပါဘူး။ ပြည်သူ သိတာသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒါကို ပြည်သူလူထုက အားပေးထောက်ခံခဲ့တာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်မတို့က ပါမွှားလေးတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၅ ကနေ ဒီနေ့ ဒီအချိန်အထိ ဆောင်ရွက်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ ပြည်သူလူထုက အမေစုကိုရော၊ ပါတီကိုရောအပြင် ဒေသခံ ပြည်သူတွေက ကျွန်မတို့ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုလာတာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ် နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်မတို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒတွေ အရိပ်အောက်မှာပဲ သွားနေပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း သူတို့နဲ့အတူတူ တသားတည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ပါတီကိုပဲ ယုံကြည်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကို မဲပေးဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်္သာမီဒီယာ - လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲနိုင်ခဲ့ရင် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘယ်ကဏ္ဍတွေကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိပါသလဲ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း - ကျွန်မတို့ အခု ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ အရှိန်ရနေပြီ။ အဲဒီ အရှိန်တွေကို ထပ်ပြီးတော့ တင်ပြီးတော့ ကျေးလက်နဲ့ မြို့ပြ ကွာဟမှု မရှိအောင် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေအတွက်ကို ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ပြီးတဲ့အခါကျရင် စီးပွားရေးဟာ အရေးကြီးတယ်၊ ဒေသတွင်းစီးပွားရေး၊ ကျွန်မတို့မြို့နယ် သံဖြူဇရပ်မှာ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ လုပ်လို့ရတယ်။ ရေလုပ်ငန်းတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့က ဒီ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့၊ အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကို အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားမယ်။ ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်း ကျွန်မအနေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့အညီ အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက် မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မဟာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသံကို မေ့ထားလို့ မရဘူး။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ တစ်ဆက်တည်း ရှိနေတာက ကလေးသူငယ်တွေ၊ အဲဒီတော့ ဒီ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးကိစ္စတွေ၊ နစ်နာချက်တွေ၊ ဒါတွေကိုလည်း လျော့နည်းသွားအောင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခု လက်ရှိမှာလည်း ကျွန်မတို့ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်မှာဆိုရင် ကျွန်မတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လေးဦးမှာ နှစ်ဦးက အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ Gender Balance ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက အဲဒီအစဥ်အလာကောင်းကို အများကြီး ဆက်ပြီးတော့လည်း ထိန်းသိမ်းသွားပါမယ်။၂၀၁၅ တုန်းကလည်း Gender Balance ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေတဲ့ အန်တီ ဒေါ်တင်အိ၊ ကျွန်မ၊ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်။ အခုလည်း ကျွန်မတို့ ပြည်နယ် အမှတ် ၂ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်တင်အေး၊ ကျွန်မ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ Gender Balance ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ အစဉ်အလာကောင်းတွေကို ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်းသွားမယ်။ နောက်ထပ် နောက်ထပ် လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါလာအောင်လည်း ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်္သာမီဒီယာ - တခြား ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာများရှိရင် ...။ ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း - တခြားတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်က မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကျွန်မတို့ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လို ရပ်တည်ခဲ့သလဲဆိုတာ မျက်မြင်ထင်ရှား သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ အရေးကိစ္စတွေမှာ ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရဖို့အတွက်ကို ပြည်သူလူထုဆီက ထောက်ခံမှုတွေ ကျွန်မတို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးစလုံးကို ထောက်ခံမဲတွေ ပေးပါလို့ ကျွန်မအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ။ <><><>
“ကျွန်မတို့ အတူတူ လာခဲ့ကြတယ်။ လူနာတွေကို အတူတူ တက်ညီလက်ညီနဲ့ ကူညီမယ်၊ ပြုစုမယ်။ ပြီးရင် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကိုယ့်မိခင်ဌာန၊ ကိုယ့်ရဲ့ နယ်မြေကို အတူတူ...
Interviews August 31, 2020
ကူးစက်နှုန်းမြင့်ဒေသ ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် သူနာပြုဆရာမ ဒေါ်အိဇင်ခိုင်နှင့် အင်တာဗျူး ၂၀၂၀ ဩဂုတ် ၃၀ ကပ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်း လတ်တလော မြင့်တက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် COVID-19 အရေး တာဝန်အရမဟုတ်ဘဲ မိမိဆန္ဒအလျောက် ယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများ တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် သွားရောက်လျက် ရှိသည်။ တတိယအသုတ်မှာ ဩဂုတ် ၂၇...
123...1515 ၏စာမျက်နှာ 1